“Waxaan nasiib u lahaa inaan ka hor tagin Lionel Messi” – Halyey Real Madrid u soo ciyaaray – Gool FM
“Waxaan nasiib u lahaa inaan ka hor tagin Lionel Messi” – Halyey Real Madrid u soo ciyaaray
(Madrid) 16 Juun 2020. Waxaa jira loollan iyo xafiiltan soo jireen ah oo ka dhexeeya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, iyadoo xilliyo ka duwan kulanka caanka ah ee El Classico ay isku wajaheen xiddigo waaweyn iyo halyeeyo kubadda cagta ka sameeyay magac iyo maamuus qaanad gaar ah ku jira.
Fernando Hierro oo horaan sanado qurux badan ku soo qaatay kooxda Real Madrid ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuusan wajihin Lionel Messi oo lagu tilmaamo xiddigii ugu weynaa ee taariikhda Barca.
Halyeyga Spain ayaa sidoo kale aaminsan guulaha Messi gaaray inay yihiin kuwa aanan loo dhowaan karin, isna uu ku faraxsan yahay inuusan wajihin kabtanka Argentina.
“Waxaan u arkaa inaan nasiib leeyahay maadaama aanan wajahin Lionel Mess,” ayuu Hierro u sheegay Radio Continental.
“Waxa uu Messi sameynayay 15-kii sano ee la soo dhaafay waa wax aanan caadi ahayn” ayuu hadalkiisa ku daray Xiddigii hore ee Los Blancos.
Fernando Hierro ayaa ugu dambeyn sheegay inuu taageere weyn u ahaan jiray Diego Maradona xilligii caruurnimadiisa.
Goorma ayay Kooxda Chelsea si rasmi ah u dhammaystiraysaa saxiixa Timo Werner?